Abane Point Iinkcukacha Ball iibheringi - China Ningbo Shenhe Ukunikeza
esimanqaku Four ibhola contact obuvelisa luhlobo ulwalathiso kabini kumqolo omnye qha emboxo ibhola ukuzala. Ngenxa kuyilo ezizodwa of vee raceway ye ring ngaphakathi kunye ring engaphandle, kukho iingongoma ezimbini umfowunelwa phakathi groove raceway nganye kunye nebhola. I angle emakuqhagamshe ° 35. Ezi iibheringi ziyakwazi ukuthwala imithwalo yezihlunu kumacala kabini. Le yezantya kwezi iibheringi ziphezulu kakhulu yaye ngokukodwa utshaba ezifanelekileyo izicelo ngesantya esiphezulu.
Ziqu & yezihlunu
Ukunikela No. Ubukhulu kumda (mm) amanqaku ukulayisha Basic (N) Ubunzima (g)
A-point ezine ball qhagamshelana obuvelisa elakhiwe ngekhaya elinye ring engaphandle with "imilo oningga" icandelo raceway groove, iperi iqhekeza-ezimbini isangqa engaphakathi, yaye omnye ball indibano f ebekwe kunye nobhedu ehokweni ngomshini, ukwakha yokudibanela ezine. Ingongoma ezine iibheringi ibhola zoqhagamshelwano ikakhulu ezisetyenziswa kwizicelo lwezixhobo ngomatshini, uthumelo amandla iinjini diesel enkulu njengoko exhasa kwaye ephethe imithwalo eliphezulu lugxile.
Previous: Double Umqolo Deep Groove Ball iibheringi
Next: Self-nokuHambelanisa Ball iibheringi
Qhagamshelana Ball Ukunikela
iiNdawo ezine Qhagamshelana Ball Ukunikela